एक वर्षमा ५ दिनसम्म कपडा लगाउँदैनन् महिला ! कारण सुन्दै अचम्म लाग्दो – AB Sansar
November 21, 2020 santoshLeaveaComment on एक वर्षमा ५ दिनसम्म कपडा लगाउँदैनन् महिला ! कारण सुन्दै अचम्म लाग्दो
अहिलेको आधुनिक विश्वमा पनि कैयौं प्रकारका परम्पराले स्थान पाएको देखिन्छ । केही पम्परा त सुन्दै अचम्म लाग्दा पनि हुन्छन् आज यस्तै परम्पराबारे यहाँ उल्लेख गरिएको छ भारतको हिमाञ्चल प्रदेशस्थित मणिकर्ण उपत्यकामा यस्तो पनि परम्परा छ, जसअनुसार विवाहित महिलाले १ वर्षमा ५दिनसम्म निर्वस्त्र अथात् नाङ्गै बस्नुपर्ने हुन्छ ।
यहाँका महिला वर्षमा ५ दिनसम्म शरीरमा कुनैपनि कपडा लगाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा महिलाहरु पुरुषको सामुन्ने देखा पर्दैनन्, एकदम एकान्त स्थानमा बस्ने गर्छन् । हरेक वर्षकाे १७ अगस्टदेखि ५ दिनसम्म यस्ताे यहाँका महिलाले कपडा लगाउन पाउँदैनन् ।यो परम्पराको पछाडि एक रोचक इतिहास लुकेर बसेको छ ।
स्थानीयका अनुसार धेरै वर्ष पहिले यो गाउँमा एक राक्षसले कपडा लगाएका महिला उठाएर लैजाने गर्थ्याे। सुन्दर कपडा लगाएका महिला देख्नेवित्तिकै राक्षसले उठाएर लैजान्थ्यो । धेरै समयसम्म राक्षसको यस्तो आतंक रहेपछि स्थानीयले जुक्ति निकाले, राक्षसबाट बच्न महिलाले कपडा नै नलगाउने ।
धार्मिक कथाअनुसार देवताले राक्षसको वध गरे पनि महिला नांगै बस्नुपर्ने परम्परा भने कायम रह्यो । यदि कुनै महिलाले यो परम्परा निभाएनन् भने, यसलाई अशुभ संकेतका रुपमा अर्थ्याइने गरिन्छ । यो परम्पराका अनुसार महिलालाई ५ दिनसम्म हाँस्न पनि मनाही छ ।तर, पछिल्लो समय भने यो परम्परामा केही पविर्तन आएको छ । महिलाहरु निवस्त्र बस्नुभन्दा पनि पातलो कपडा लगाउन थालेका छन् ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत : पक्ष-विपक्षमा कति आयो भोट ?
बेलायतमा स्नेहा श्रेष्ठ बनिन् पहिलो नेपाली महिला ब्यारिष्टर